Kismaayo News » Trump oo ka yaabiyey saxaafada Maraykanka
Trump oo ka yaabiyey saxaafada Maraykanka
Kn: Sawirkan wuxuu ka yaabiyey warbaahinta Maraykanka oo dhan, waxay noqotay arrin amakaag iyo fajiciso ku noqotey wariyeyaashii Aqalka Cad markii ay arkeen madaxweyne Trump oo la fadhiya Henry Kessinger, xoghayihii hore ee arrimaha dibada Maraykanka.
Marka koowaad jadwalka kuma uusan ku jirin dadka uu Trump la kulmaayo, marka labaad cidina ma aysan filanaynin iyada oo fadeexadii Watergate la hadal hayo in Trump agtiisa lagu arkaayo Kessinger oo ka mid ahaa golihii wasiirada madaxweyne Nixon oo codka kalsoonida loo qaaday, xilka laga qaaday.
Iyada oo sidoo kale la hadal hayo xiriirka dhow ee Trump iyo Ruushka ayaa waxaa iyadana jirta in Kessinger xitaa buugaag badan laga qorey xiriirka dhow ee uu la lahaa Ruushka, horeyna waxaa wargeysyada u qoreen in uu ku dadaalayay in uu isfaham ka dhexdhaliyo Trump iyo Putin.
Malaha waa taariikhda dib isu qorayee, Trump waxa uu dhawaan shaqada ka eryey James Comey, agaasimihii FBI-da, kaasi oo baarayay fadeexada xiriirka Trump iyo Ruushka, si taasi la mid ah waxaa isagana sameeyey Madaxweyne Nixon waxyar ka hor intii aanan codka kalsoonida loo qaadin, fadeexadii Watergate-na aysan sii qarxin.
Waxayse u egtahay in Trump uu laftiisa isku sii dhalaalinayo, wax kasta oo lagu heystana uu muujinayo in ay sax yihiin.
Trump waxa uu shalay qaabiley wasiirka arrimaha dibada Ruushka Sargey Lavrof, kulankana waxa uu kusoo aaday xili Aqalka Sanate-ka Maraykanka uu baarayo lugta Ruushka ay ku lahaayeen doorashadiisa.